विश्वकप क्रिकेटः वेस्ट इन्डिजले टस जित्यो, टिममा को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकप क्रिकेटः वेस्ट इन्डिजले टस जित्यो, टिममा को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, जेठ २३ । इंग्ल्याण्डमा जारी आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा अष्ट्रेलिया विरुद्धको खेलमा वेस्ट इन्डिजले टस जितेर बलिङ रोजेको छ ।
यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजेदेखि नटिगंघमा सुरु हुँदैछ । यी दुई टिमले पहिलो खेलमा जीत हासिल गरिसकेका छन् । वेस्ट इन्डिजले पहिलो खेलमा पाकिस्तान र अष्ट्रेलियाले अफगानिस्तानलाई हराएको थियो । टिममा आज को–कोले पाए मौका? हेर्नुस
अष्ट्रेलियाः आरोन फिन्च (कप्तान), डेविड वार्नर, उस्मान खवाजा, स्टिभ स्मिथ, ग्लेन म्याक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स केरी, नाथन कुल्टर नाइल, प्याट कमिन्स, मिचेल स्टार्क र एडम जम्पा ।
वेस्ट इन्डिजः जेसन होल्डर(कप्तान), क्रिस गेल, इभिन लुईस, शाई होप, निकोलस पुरन, शिमरोन हिटमायर, आन्द्रे रसेल, कार्लोस वर्थवेट, एलशे नर्श, शिल्डन कर्टेल रओशन थोमस ।